हाम्राे पिपलबाेट » वर्षमा तीन जना फेरिए राप्तीसोनारीका कार्यालय प्रमुख वर्षमा तीन जना फेरिए राप्तीसोनारीका कार्यालय प्रमुख – हाम्राे पिपलबाेट
वर्षमा तीन जना फेरिए राप्तीसोनारीका कार्यालय प्रमुख
बाँकेको राप्तीसोनारी गाउँपालिकामा हालै सरुवा भएर प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रुपमा लोकबहादुर शाही आएका छन् । राप्तीसोनारी गाउँपालिकामा महिनौ दिन नपुग्दै प्रमुख प्रसासकिय अधिकृतको सरुवा हुने प्रचलन रहेको छ । केही समय अगाडी उक्त राप्तीसोनारी गाउँपालिकामा कार्यरत दल बहादुर बस्नेत प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतको रुपमा कार्यरत रहे । ६ महिना नपुग्दै उक्त गाँउपालिकाबाट सरुवा
भए । प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत बुढाको ठाँउमा पुन सरुवा भएर आए नर बहादुर बि.क. । तर बि.क.को बसाई राप्तीसोनारीमा खास्सै राम्रो भएन् । कुन विषय, कुन शिर्षक, कुन मुद्धामा चित बुझेन् उनलाई । प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत बि.क. निकै छोटो सयम सेवा दिएर सरुवा भएर गए । बि.क.को ठाँउमा भर्खरै सरुवा भएर आएका छन्, प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतको रुपमा लोक बहादुर शाही । राप्तीसोनारी गाउँपालिकामा ३ महिना पनी कार्यालय प्रमुख नटिक्दा सेवाग्राहीहरुले सास्ती खेप्नु परेको स्थानिय बासीहरुको भनाई रहेको छ । प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत बि.क.ले जनतालाई समयमा सेवा दिन नसकेको चौतर्फी आलोचना भएको थियो । उता प्रशासकिय अधिकृतले आफ्नो मनोमानी ढगंबाट गाँउपालिका चलाउन खोजेको जनप्रतिनिधीहरुले आरोप रहेको थियो ।
हालै सरुवा भएर आएका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत शाहीलाई पनि राप्तीसोनारी गाउँपालिकामा काम गर्नका लागि निकै चुनौतीनै देखिन्छ । २,३ महिना नपुग्दै प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतहरुको हुने सरुवाले जनप्रतिनिधी र कर्मचारीको सेटिङ् नमिलेको छलङ्ग हुन्छ । कर्मचारी भर्ना देखी गाउँपालिकाका विभिन्न बजेट योजनाहरुमा कर्मचारीलाई दबाब दिने खालका क्रियाकलापले राप्तीसोनारी गाँउपालिमा प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत हरु फेरबदल भैरहन्छ । यतिसम्म कि जनप्रतिनिधीहरुले कर्मचारीलाई विभिन्न आरोप लगाउँदै सरुवा गराउने चक्करमा लागि परेका छन् । हालै सरुवा भएर आएका प्रमुख प्रशासयिक अधिकृतको राप्तीसोनारीमा सेवा अवधी पनी निकै छोटो हुने संकेत देखिन्छ । भौगोलिक हिसाबले सबैभन्दा ठूलो गाउँपालिकाका राप्तीसोनारीका जनप्रतिनिधीहरुले भने बमोजिम काम नगरिदिँदा पटक पटक कार्यालय प्रमुखको सरुवा हुँदै आएको नाम नबताउने शर्तमा एक प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतले बताए । नयाँ आगन्तुक प्रमुख प्रशासयिक अधिकृत आउँदा फूल मालाले सम्मान गर्ने र सरुवा भएर जाँदा उक्त बिदाई कार्यक्रममा जनप्रतिनिधीहरु उपस्थित समेत हुँदैन । आईतबार एक कार्यक्रमकाबीच राप्तीसोनारी गाउँपालिका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत लोक बहादुर शाहीलाई गाउँपालिका जनप्रतिनिधी र कर्मचारीले सम्मान गरेका छन् । राप्तीसोनारी गाउँपालिका उपाध्यक्ष धनीकुमारी खत्रीको सभापतित्वमा भएको कार्यक्रममा निर्वतमान प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नरबहादुर बिक, शिक्षा शाखा प्रमुख जीवन न्यौपाने लगायत विभिन्न शाखाका प्रमुख तथा कर्मचारीले स्वागत गरेका । कर्मचारी र जन प्रतिनिधीबीचको सहकार्यले मात्र गाउँपालिकाको विकास सम्भव हुन्छ । तर कर्मचारीलाई जनप्रतिनिधीले काम गर्ने वातावरण सिर्जना नभएको पाइएको हो । स्वागत कार्यक्रममा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शाहीले आफु राप्तीसोनारीमा कार्यरत रहदासम्म इमान्दारी पुर्वक काम गर्ने प्रतिवद्धता जनाए । उनले जनप्रतिनिधी र आफ्ना सहकर्मी कर्मचारीसँग मिलेर काम गर्ने बताएका छन् । शााहीले यसो भनिरहँदा राप्तीसोनारीमा सेवा प्रवाह गर्दा थुप्रै चुनौतीका पखालहरु छन् । कानुन ऐन, नियम लाई परिपालना गर्ने राष्टू सेवक कर्मचारीलाई जनप्रतिनिधीहरुको दबाबबाट काम गर्न लगाउने प्रवृद्धिले जनप्रतिनिधी र कर्मचारीको सम्वन्धलाई दुरी टाढा गर्ने प्रचलनको अन्त्य हुन जरुरी देखिन्छ । कर्मचारीको सरुवाका लागि मन्त्रालय धाउनुपर्ने जनप्रतिनिधीहरुको नैतिकता माथी यतिखेर प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ । गाँउपालिकालाई एकलौटी ऐन कानुन मिचेर जनप्रतिनिधीहरुले चलाउन खोज्ने प्रवृतीको समेत अन्य हुन जरुरी छ ।